Places ठाउँहरू भान्साकोठामा माइक्रोवेव पत्ता लगाउन बेजिया
Places ठाउँहरू भान्साकोठामा माइक्रोवेव पत्ता लगाउन
मारिया vazquez | | पाक कला
माइक्रोवेव एक अपहरण उपकरण हुनुपर्दछ भान्छामा। हामी मध्ये कोही जो केवल केही वर्ष पहिले खाना तातो गर्न प्रयोग गर्थ्यौं, आज हामी यसलाई व्यंजनहरू पकाउन पनि प्रयोग गर्दछौं द्रुत कस्टर्ड कि हामी केहि घण्टा पहिले साझा। त्यसोभए यसको लागि भान्छामा ठाउँ बनाउन आवश्यक छ, तर कहाँ?
भान्साकोठामा विभिन्न ठाउँहरू छन् जहाँ हामी माइक्रोवेभ राख्न सक्छौं। सामान्य छ यसलाई एउटा स्तम्भमा राख्नुहोस् चुँडनको छेउमा, तर भान्साको आकार र यसको वितरणको आधारमा, यो विकल्प नहुन सक्छ वा यो सबैभन्दा सुविधाजनक नहुन सक्छ। यसैले हामी आज तपाईंलाई अन्य विचारहरू देखाउन चाहन्छौं, ताकि आउँदो सुधारको सामना गर्नु अघि तपाईंसँग सबै जानकारीहरू छन्।
1 स्तम्भमा वा ओभनसँग समानान्तरमा
2 एक अग्लो कोठामा
3 एक 'कफी स्टेशन' को एक हिस्साको रूपमा
4 टापु वा प्रायद्वीपमा
स्तम्भमा वा ओभनसँग समानान्तरमा
स्तम्भमा ओभन र माइक्रोवेभ राख्नु सबैभन्दा लोकप्रिय विकल्पहरू मध्ये एक हो। दुबै उपकरणहरूबाट पनि एक धेरै व्यावहारिक आरामदायी उचाइमा छन् सबैले त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्दछन्। यी केसहरूमा आदर्श यो हो कि दुबै उपकरणहरूले एकै डिजाईन लाइनलाई पछ्याउँछन् र त्यो सबै कुराको क्याबिनेटसँग मिल्दो हुन्छ।
यदि तपाईंको भान्साकोठा पर्याप्त छ भने, तपाईं यो स्तम्भ व्यवस्थामा सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। कसरी? राख्दै समानान्तरमा ओभन र माइक्रोवेभ, ताकि प्रत्येकले क्याबिनेटको स्तम्भ ओगटे। भित्र झुकाउन वा टिप्टोमा उभिनका बारे बिर्सनुहोस् चीजहरू भित्र हेर्न वा प्राप्त गर्नका लागि।
एक अग्लो कोठामा
माइक्रोवेभलाई अग्लो क्याबिनेटमा राख्दै यो सबैभन्दा सहज छैन; हामी मध्ये धेरै जो लम्बे छैनौं उसले तरल पदार्थको साथ त्यो उचाईमा काम गर्न कठिनाइ भोग्न सक्छ। जे होस्, जब यो उपकरण विरलै प्रयोग गरिन्छ वा तपाईं भान्साकोठामा अन्य आवश्यकताहरूलाई प्राथमिकता दिन चाहानुहुन्छ, यो राम्रो समाधान हुन सक्छ।
तपाईं माइक्रोवेभ केको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ? यदि तपाईं यसलाई बिहानको खाजामा दुध तात्न प्रयोग गर्नुहुन्छ भने मुख्य रूपमा राख्नुहोस् फ्रिजको नजिक यो तपाइँको लागि धेरै उपयोगी छ। यदि तपाईं खाजा वा बेलुकाको खाना तयार गर्न यसलाई दैनिक प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईंले फ्रिज र स्टोभको बिचमा ठाउँ भेट्टाउनु पर्छ।
एक 'कफी स्टेशन' को एक हिस्साको रूपमा
कफि स्टेशन भनेको के हो? एक ठाउँ जहाँ तपाईं कफि तयार गर्न आवश्यक सबै चीजहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ: कफी निर्माता, कप, चिनी ... तिनीहरू प्रायः हुन्छन् ढोका संग क्याबिनेट यसले कपाटको सामग्री लुकाउन वा लुकाइएको वा फोल्डि doors ढोका प्रणालीहरूको धन्यवादमा अवलोकन गर्न छोड्ने अनुमति दिन्छ।
यस प्रकारको वार्डरोब प्राय: अवस्थित हुन्छ भान्छाको काउन्टरमा र यसमा प्राय: तीन भन्दा बढि सेल्फहरू हुँदैन। कफी तयार गर्न आवश्यक बाहेक, तपाईं यी धातु बाकसमा राख्न सक्नुहुनेछ तपाईंको मनपर्ने मिठाई वा रोटीको टुक्राको साथ आफैंलाई केही राम्रो टोस्टहरू बनाउन।
टापु वा प्रायद्वीपमा
यदि तपाईंसँग बैठक कोठामा भान्साकोठा खुल्ला छ भने, तपाईं माइक्रोवेभ टापु वा प्रायद्वीपमा राख्न सक्नुहुनेछ जुन दुबै ठाउँहरू समात्दछ, आगोको अगाडि, ताकि दुई फरक व्यक्तिले एक र अर्को प्रयोग गर्न सक्दछ बाटोमा नपुगीकन। के यो उचाईमा उनीहरूलाई लिन सहज छ? क्रोचिंगबाट बच्नको लागि एक मात्र उपाय एक शर्त छ ड्रयर माइक्रोवेव, एक हटाउन योग्य शीर्ष लोडिंग माइक्रोवेभ। के तपाईं यसलाई हिट गर्नुहुन्छ? केही ब्रान्डले तिनीहरूसँग महँगो केहि पनि काम गर्दछ।
भान्सा मा आफ्नो माइक्रोवेव को लागी एक ठाउँ छैन? के तपाईं यसको लागि स्थान फेला पार्न प्रमुख नवीकरणहरू गरेको जस्तो लाग्दैन? तपाईं यसलाई काउन्टरटपमा राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँसँग राम्रो छ भने काउन्टरटप स्पेस भान्साकोठामा माइक्रोवेव पत्ता लगाउन यो राम्रो समाधान हो।
यसलाई खुट्टामा राख्नुहोस् जुन यसलाई हल्का बनाउँदछ कि तातो विस्तार गर्न दिईन्छ र तखता प्राप्त गर्नुहोस् यसमा ठाउँ को फाइदा लिन डिजाइन। तपाईं शीर्षमा अन्य साना उपकरणहरू वा भाँडाहरू राख्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईं हातमा राख्न चाहनुहुन्छ र त्यो पहिले त्यो काउन्टरटप स्थान ओगट्यो।
भान्साकोठामा माइक्रोवेव भेट्टाउन धेरै ठाउँहरू छन्। सबैभन्दा सहज, कुनै श doubt्का बिना, यो हो कि दुर्घटनाहरू कम गर्न क्रमशः आँखाको तहमा आरामदायी उचाईमा छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » घर » पाक कला » Places ठाउँहरू भान्साकोठामा माइक्रोवेव पत्ता लगाउन
'Hache' यसको दोस्रो सत्रको साथ नेटफ्लिक्समा आउँछ
द्रुत माइक्रोवेव कस्टर्ड